आफ्नो रोगसँग लड्ने क्षमता कसरी बढाउने ? - Sabal Post
आफ्नो रोगसँग लड्ने क्षमता कसरी बढाउने ?
हरेक मानिससँग कुनै पनि रोगसँग लड्ने क्षमता फरक फरक हुन्छ । रोगसँग लड्नसक्ने क्षमता बढी भएका मानिसहरु कम बिरामी हुन्छन् भने यो क्षमता कम भएका मानिसलाई धेरै रोग लाग्छ भन्ने धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, कसरी रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने र त्यसमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा हुँदैन । साथै, यो धेरै मानिसको चासोको विषय पनि हो ।केले बढाउँछ रोगसँग लड्ने क्षमता ? मानिसको जीवनशैलीले प्रत्यक्षरुपमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ भन्ने अहिलेसम्म कुनै प्रमाण भेटिएको छैन । तर, खानेकुरा, शारीरिक अभ्यास, उमेर, मनोवैज्ञानिक दबाब र अन्य विभिन्न पक्षको सकारात्मक असर रोगसँग लड्ने क्षमतामा पर्छ । यस्तोमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु आवश्यक रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने स्वस्थकर उपायहरु :स्वस्थकर जीवनयापनको लागि यी उपाय अपनाउनु राम्रो हुन्छ :– – धुम्रपान नगर्नु – तरकारी र फलफूल खानु – नियमित शारीरिक अभ्यास – तौल सन्तुलनमा राख्नु – अल्कोहल ठिक मात्रामा मात्र खानु – पर्याप्त सुत्नु – राम्रोसँग हात धुने र राम्ररी पाकेको खानेकुरा मात्र खाने – तनाव कम गर्ने प्रयास
प्रतिरक्षा प्रणाली र उमेर – उमेरसँगै मानिसको रोगसँग लड्ने क्षमता पनि कमजोर बन्दै जान्छ । यसले मानिसलाई धेरै रोगको संक्रमण हुन्छ र यसले क्यान्सरसम्मको जोखिम बढाउँछ । धेरै अध्ययनले पनि युवा अवस्थामाभन्दा बृद्ध हुँदै गए पनि कुनै पनि रोगको संक्रमण हुने खतरा पनि बढी हुन्छ । ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसको मृत्युको कारण इन्फ्लुएन्जा, श्वासप्रश्वासको संक्रमण र निमोनिया छन् । वृद्ध मानिसमा कुनै पनि रोगको संक्रमण भए पनि त्यसबाट निको हुन पनि गाह्रो हुने अध्ययनले देखाएको छ । इन्फ्ुएन्जाको खोप पनि ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसमा कम प्रभावकारी देखिएको थियो । यस किसिमको खोप स्वस्थ बालबालिकामा भने निकै प्रभावकारी हुने गरेको छ । कम प्रभावकारी भए पनि यस किसिमको खोपले वृद्ध मानिसको मृत्यु तथा बिरामि हुने दरमा पनि कमी आएको छ ।खानेकुरा र प्रतिरक्षा प्रणाली – प्रतिरक्षा प्रणाली राम्रो हुन मानिसको आहार पनि राम्रो बन्न सक्छ । राम्रो, नियमित पौष्टिक आहारले मानिसको प्रतिरक्षा प्रणाली पनि राम्रो बन्न पुग्छ ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका र पौष्टिक तत्वको अभावको सामना गरेका मानिसमा कुनै संक्रामक रोगसँग लड्नसक्ने क्षमता पनि कम हुन्छ ।पौष्टिक आहारमा पाइने जिंक, सेलेनियम, आइरन, फोलिक एसिड र भिटामिनहरुले मानिसको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउँछ ।तनाव र प्रतिरक्षा प्रणाली – मानिसमा लाग्ने धेरै रोगको सम्बन्ध उनीहरुले लिने तनाव निर्भर हुने गरेको छ । मानिसको तनावको कारण पेट दुख्ने, मुटुको रोग लगायतका समस्या लाग्नसक्छ । तनावको र मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीको विषयमा धेरै कुरा पत्ता लाग्न बाँकी छ । तर, मानिसको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन तनाव कम गर्दै जानुपर्ने वैज्ञानिकहरुले बताउँदै आएका छन् ।शारीरिक अभ्यास – स्वस्थ जीवनको लागि नियमित अभ्यास सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो । यसले मानिसको स्वास्थ्यमा सुधार हुने गरेको छ । नियमित अभ्यासले मानिसको रक्तचाप कम गर्ने, तौल सन्तुलनमा राख्ने र अन्य विभिन्न किसिमको रोगबाट बचाउँछ । नियमित अभ्यासले पनि स्वस्थकर खानाले जस्तै मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।
भाईरल अष्ट्रेलियन काण्ड : उक्त युवती भारतीय…
मानव वेचविखनको आरोपमा वडाअध्यक्ष पक्राउ
रेडियोकर्मी सुरज श्रेष्ठको निधन
नेपाल–जापान सम्बन्ध नागरिक तहसम्म